Zvigadzirwa Fekitori - China Zvigadzirwa Vagadziri uye Vanotengesa
Zhenji soy mchero
Yekutanga Brewed Premium Soy Sauce
Rice Rice Vhiniga
IBC 12% Vhiniga
Chigadzirwa zita: 12% vhiniga Yakatemwa, waini vhiniga Inongedzo: Mvura, inonwa doro. Yakazara acid ≥ 12.00g / 100ml Shelf hupenyu: 18 mwedzi yeSoko munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: iyo yekumira yakajeka, isina kunyungudika, ine yakakwirira kugadzikana uye isina kudzosa matope. Kushandisa: Kushandisa mukomboni yekusimbisa, kuunganidza indasitiri, kuchengetedza chikafu, kudya chewing, indasitiri yemishonga. Kutsanangurwa: 1000L IBC 20 zvigubhu pa 20FCL Nutrition Ruzivo rwekushandira saizi: 100mL NRV% Energy ...
Chigadzirwa zita: 9% Wite mupunga vhiniga Halal yakasimbiswa, chena mupunga vhiniga Inonhuhwirira: Mvura, mupunga, inodhakwa doro. Yakazara acid ≥ 9.00g / 100ml Shelf hupenyu: mwedzi gumi nemaviri Chitoro munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: iyo yekumira yakajeka, isina kunyungudika, ine yakakwirira kugadzikana uye isina kudzosa matope. Kushandisa: Kushandisa mukomboni yekusimbisa, kuunganidza indasitiri, kuchengetedza chikafu, kudya chewing, indasitiri yemishonga. Kutsanangurwa: 25L mapurasitiki emabhaketi mazana manomwe mabheji pane 20FCL Nutrition Information S ...
Zita rekugadzirwa: zhenji soy mchero Halal yakasimbiswa, yakachena soy mchero Musanganiswa: Mvura, defatted soya bhinzi, gorosi, munyu. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) 80 0.80g / 100ml Hupenyu: Giredhi rekutanga Shefu yehupenyu: mwedzi gumi Soko munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: Iyo kunhuhwirira kwakapfuma, uye kuravira kwacho kunonaka. Kushandiswa: Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzesvosveti, siki, soy muto weupfu, yekupfekedza sosi, yakaomeswa maeels, barbecue sosi, yakagochwa nyama sosi, chikafu chando, iyo yekura uye salting yeaya ...
Zita rezvigadzirwa: zhenji soy mchero Hapana GMO soya mchero Unforent: Mvura, defatted soya, gorosi, munyu. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) 80 0.80g / 100ml Hupenyu: Giredhi rekutanga Shefu hupenyu: mwedzi gumi nemiviri Chitoro munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: Iyo kunhuhwirira kwakapfuma, uye kuravira kwacho kunonaka. Kushandiswa: Inoshandiswa zvakanyanya mukunwa, siki, soy muto weupfu, yekupfekedza sosi, yakaomeswa maeel, barbecue sosi, yakagochwa nyama svutugadzike, chikafu chine chando, inguva uye salting yezvigadzirwa nyama. Sp ...
Zita rekugadzirwa: zhenji soy mchero Asika wakabikwa, yakachena soy mchero Musanganiswa: Mvura, yakasviba soya, gorosi, munyu. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) 80 0.80g / 100ml Hupenyu: Giredhi rekutanga Shefu hupenyu: mwedzi gumi nemiviri Chitoro munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: Iyo kunhuhwirira kwakapfuma, uye kuravira kwacho kunonaka. Kushandiswa: Inoshandiswa zvakanyanya seshoko, masapuni, soy muto weupfu, yekupfekedza sosi, yakaomeswa maeel, barbecue sosi, yakagochwa nyama sosi, chikafu chando, iyo yekunoisa uye salting yangu ...
Kosher yakasimbiswa, mupunga vhiniga Zvinongedzo: mvura, yakakwira fructose chibage manyuchi, chena shuga, munyu, girazi, doro, mupunga, MSG, citric acid, sodium benzoate, sucralose Total acid ≥ 3.50g / 100ml Shelf hupenyu: mwedzi gumi nemaviri. Chitoro munzvimbo ine mumvuri uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chinhu: Inotapira uye ine munyu Kusevenza: Inokodzera chiJapan cuisine, sushi Rondedzero: 18L pa carton 1000 makatoni pa 20'FCL Nutrition Ruzivo Kubatira saizi: 100mL NRV% Energy 511kJ 6% Protein 0g ...
Zita rekugadzirwa: zhenji soy mchero Hapana GMO, yakachena soy mchero Musanganiswa: Mvura, defatted soya, gorosi, munyu. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) 80 0.80g / 100ml Hupenyu: Giredhi rekutanga Shefu hupenyu: mwedzi mitanhatu Soko munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Chigadzirwa chigadzirwa: Iyo kunhuhwirira kwakapfuma, uye kuravira kwacho kunonaka. Kushandiswa: Inoshandiswa zvakanyanya mukunwa, siki, soy mchero weupfu, yekupfekedza sosi, yakaomeswa maeel, barbecue sosi, yakagochwa nyama svutugadzike, chikafu chakachaya, iyo yekura uye salting yezvigadzirwa nyama ...
Ichena yemupunga vhiniga Iyo isina ruvara, yakajeka, yakasviba uye inonhuwira. Kusanganisa kwakabikwa uye kubika kunogona kuchengeta ndiro yacho yepakutanga. Zvinongedzo: mvura, mupunga, doro rinodyiwa, munyu, shuga huwandu hweasidhi ≥ 3.50g / 100ml Soko munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Hafu yehupenyu: mwedzi makumi maviri nembiri Ruzivo: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pa 20'FCL Nutrition Ruzivo rwekushandira saizi: 100mL NRV% Energy 93kJ 1% Protein 0g 0% Fat 0g 0% Carbohydrate 2.6g 1% S ...
9% mupunga vhiniga Inogadzirwa neiyo yakadzika yevhiniga Fermentation tekinoroji. Iyo yakakodzera mazai anowira, nhema nhema uye soya. Inogona kunyungudusa mazai emukati meawa makumi maviri nemana kana tagadzira vhiniga yezai yeji. Zvinongedzo: mvura, mupunga, doro rinodyarwa Hwese acid ≥ 9.00g / 100ml Chitoro munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Shelf hupenyu: mwedzi makumi maviri neshoma Ruzivo: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pa 20'FCL Nutrition Ruzivo rwekushandira saizi: 100mL NRV% Energy 130kJ 2% Prot ...
1 + 1 mupunga mupunga vhiniga Iyo yakapfava muvara uye inonaka inozorodza. Iyo yakakodzera kune akasiyana-siyana ekubika masitaiti. Ipo ichichengeta iwo mavara epakutanga emiriwo, inogona kuvaita kuti varave crispy uye inozorodza. Kana ichishandiswa senge yekupfekedza uye kuisa dhizaini, inogona kuita kuti zvikafu zvinyorove, zvakapusa, zvichinatsa uye zvichizorodza. Zvishongedzo: mvura, mupunga, doro rinodyiwa, soy sosi, chena granulated shuga, lactic acid, citric acid, malic acid, disodium inopora, sodium benzoate, I + G, sucralose. Yese acid ≥ 4.00g / 100ml S ...
Zita rechigadzirwa: Zhenji soy sosi Zhenji soy mchero unogadzirwa kubva kune isiri-GMO soya uye yakakwirira-yegorosi goridhe nehupfumi hwekugadzira tekinoroji. Zvinongedzo: mvura, yakasviba soya bhosi, gungwa, munyu, potasiamu sorbate, ini + G, sucralose Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) 70 0.70g / 100ml Hunhu: yekutanga giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Shefu yehupenyu: mwedzi makumi maviri neshanu Rondedzero: 1L * 12 pa carton 1280 makatoni pa 20'FCL 500mL * 24 pa carton 1100cartons pa 20'FCL Nutrition Information Kushumirwa ...
Daodao light soy mchero
Chigadzirwa Chigadzirwa: Daodao Chiedza Soy Sauce Iyo inonyanya kushandiswa kune kurovera nekusimudzira-kufinya kana seyakaipfekedza kana kudhinda sosi, nyowani uye inonaka. Zvishongedzo: mvura, yakasviba soya, gorosi, munyu, doro rinodyika, glue, monosodium glutamate, caramel, sodium benzoate, I + G, sucralose. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Hunhu: Chechitatu giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Hafu yehupenyu: mwedzi makumi maviri nemana Ruzivo: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pane 20'FCL Nutrition Infor ...